काठमाडौ देखि टिकापुर साइकल यात्रा कथाहरु – भाग २ – नयाँ प्रहर
काठमाडौ देखि टिकापुर साइकल यात्रा कथाहरु – भाग २
काठमाडौं, फाल्गुन २० March 4, 2018
सुरेन्द्र बजगाईः एउटा सामाजिक कार्यकर्ता जो काठमाडौको च्यासलमा गएको ५ बर्षदेखि पढिपनिरहेका छन्, अहिले बिएसडब्लु तेश्रो बर्षमा अध्यनरत उनि सिन्धुपाल्चोक माझिगाउमा रमाइलो शिक्षा नामगरेको कार्यक्रम अन्र्तगत ग्रामिण परिवेशका लगभग १२५ जना वालवालिकालाई कम्प्यूटर सिकाँउदछन् ।
इशान ः एकजना यूवा जस्लाई एकसमयमा सिँहदरवारमा रंग छ्याप्ने कसुरमा सरकारले गिरफ्तार पनि गरेको थियो र ब्यापक जनदबाबमा उन्लाई रिहा गरियो । १२ दिनसम्म हिरासतमा केहि नखाइकन वसेका उन्लाई हिरासतको सातौँ दिन भने साथीभाइले जुस खुवाएका थिए र १२ दिनका दिन उनिलाई रिहा गरियो । सिहदरवारमा नाकाबन्दी र तराई आन्दोलन ताका रगं छ्याप्ने कार्यमा संलग्न इशानका समर्थनमा देश विदेश लगायतका धेरै नेपालीले ह्याशट्यागमा आइएमविथइशान निकै चर्चित भएको थियो ।
काठमाडौ टिकापुर साइकल यात्रा को पृष्ठभुमी
१५ दिनसम्म न्यून आयश्रोत भएका
ब्यक्तिहरुलाई काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रका श्रमजिवि मजदुरहरुलाई उनिहरुको
न्यून आयको गुजारा र पसिनाको सम्मान स्वरुप भादगाउले टोपी र गम्छा प्रदान गरि सम्मान अभिब्यक्त गरेका थिए । यसैक्रममा
राज्य ,स्वं र बृहत्तर नेपाली समाज मार्फत वहाँहरुप्रति गरिएका जानअन्जान विभेदहरुका लागी
क्षमासम्म मागिएको थियो । भादगाँउले टोपीले पहाडी समुदाय र गम्छाले मधेशी
समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएको यस कार्यक्रमले तराई पहाड विचको सहकार्य र
सहअस्तित्वलाई पनि उजागर गर्दै दोश्रो चरणमा काठमाडौबाट टिकापुरसम्मको
साइकलयात्रा गरेर त्यस्तै बिभिन्न श्रमजिवी मजदुर नेपालीहरुका पिडा , कथा। वेदनाहरु
सुन्दै अगाडि बढेको थियो, आउनुहोस यसैक्रममा प्रस्तुत छ यि दुई यूवाः इशान र
सुरेन्द्रले वाटामा भेटेका न्यून आय भएका औसत नेपालीहरुको कथा , जस्ताको तस्तै
उनिहरुले टिकापुर घटनामा मृत्यूभएका अधिकांशका घरघरमा गएर उनिहरुका पिडा र चोटहरु पनि बटुलेर ल्याएका छन् । अहिले आफन्तको टिकापुर आन्दोलनको अमानविय घटनामा आफन्त गुमाएपछि उनिहरुले कसरी
जिवनयापन गरिआएका छन् र राज्यले कस्तो सहयोग गरेको छ या छैन पनि सोधिएको
थियो, मधेश प्रतिको माया दर्शाइएको यस साइकलयात्राले तराई र पहाडको सहअस्तित्वको
एउटा विगुल फुकेको छ ।
टीकापुर • कैलाली
१० दिनअघिमात्र उहाँले नानी जन्माउनुभएकी रहेछिन्। त्यैपनि उहाँ खुशी हुनुहुन्न। उहाँको चेहरामा त्रास छाएको छ। हामीसङ्ग जेजसो कुरा गर्नुभयो मसीनो श्वरमा गर्नुभयो। एकपटक पनि शीर उठाएर कुरा गर्नसक्नुभएन उहाँले। उहाँ हुनुहुन्छ यशोदा साउद। पोहोरसाल भदौ ७ गतेको दिन टिकापुरमा उहाँको १८ महिने छोरो टेकवहादुर साउदको गोली हानी हत्या गरिएको थियो।
“आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि भागाभाग मच्यो। अश्रु ग्याँस्हरू प्रहार हुनथाले। घरमा भएका सवैजना र उतापट्टीको घरका मान्छे यसै घरको कौसीमा जम्मा भएर सव हेरिरहेका थियौं। घटना भएको थाहापाएपछि काममा जानुभएको श्रीमान् (सशस्त्र प्रहरीका नेत्र साउद) तुरुन्तै घर फर्कनुभयो।
हाम्रो घर पछाडितिर केही घाइते भईसकेका प्रहरीहरू ज्यान वचाउन लुकेर वसिरहेका थिए। तिनले कामको क्रममा चिनेको भएर होला उहाँ (श्रीमान्) लाई देख्नेवितिक्कै ‘पानीपानी’ भनेर गुहार गर्नथाले। पानी माग्नथाले। मैले उहाँलाई भने पानी नदिनुहोस् फेरि आन्दोलनकारीहरूको नजर हाम्रो घरमा पर्छ। हामीलाई पनि नराम्रो हुनसक्छ। तर उहाँले मान्नुभएन। भनेकी सहयोग गरेको राम्रै हुन्छ। अगाडितिरवाट आउने अवस्था थिएन। हामीले घरपछाडितिर सीडी खसालेर तिनलाई भित्र ल्यायौं।
पछि स्थिति सामान्य भएपछि ती प्रहरीहरूलाई हामीले अस्पताल पठाउने व्यवस्था गर्यौं। उहाँ त्यतिखेर यहीँ अलि वाहिरतिर हुनुहुन्थ्यो। चोकतिर प्रहरीहरू पनि थिए।
वावुले आची भयो भनेर ईशारा गर्यो। अनि मैले वावुलाई यहीँ वाहिर छोडेर भित्र कपडा लिन गएँ। त्यत्तिकै वाहिर गोली चलेको आवाज आयो। दौडिएर वावुलाई हेर्नआउँदा यहीँ (दैलोमा) ऊ ढलिरहेको थियो। यता सव रगतैरगत थियो। गोली कसले हान्यो भनेर हामीले देखेनौं। तर गोली आन्दोलनकारी मध्यकैले हानेको हो। अरू कसले गर्छ र? पानी खुवाएको रिश वावुमाथि पोखेका हुन् तिनले।“
सारा परिवारमा टेकको मृत्युपछि नैराश्य छाएको रहेछ। घटनाको ६ महिनापछि नाती टेकवहादुरलाई असाध्यै मायाँ गर्ने हजूरआमाको त्यसै दैलोमा ‘हार्ट्अट्याक्’ भएर देहान्त भएको रहेछ। हृदयघात हुनु ठीकअघि उहाँले यशोदालाई टेकवहादुरलाई अघिल्लो दिन सपनामा देखेको कुरा वताउनुभएको रहेछ।
यशोदाको जीवन अहिलेपनि भदौ ७ गतेकै दिन अड्किरहेको प्रष्टसङ्ग देख्नसकिन्छ। उहाँले जत्ति प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म अघिवढ्न नसकिरहेको वताउनुभयो।
“हामी त ठूलो मान्छे भयौं। हाम्रो कुरा त छोड्दिनु। ऊसङ्ग खेल्ने दिदी र फूपुका छोराछोरीले पनि अहिलेसम्म उसको वारेमा सोध्छन्। अनि दुःखी हुन्छन्। तिनलाई हामीले कसरी सम्झाउने?
एक वर्ष यत्तिकै विताईयो। दिनदिनै त्यहि कुरा सम्झेर। कसैले काम दिए म काम गर्नचाहन्छु। कुनै काम गरियो भने कमसेकम मनमा त यो कुरा आईरहन्न।“
@M चित्रवहादुर देउवा
लम्की • कैलाली
“अहिलेपनि गाउँतिरका वाटाहरू यत्ति नराम्रा छन् कि साधारण गाडीहरू जान्नन्। तर गाढा जत्ति गड्ढा भएपनि अट्ने वाटो भएको सवतिर पुग्छ।
किसानको गाढा कि त किसानी कि त सेवा गर्न चल्छ। अहिले एउटा नातेदार कुर्दैछौं। निक्कै विमार भएपछि परिवारले जचाउन लगेको थियो। नारायणघाटवाट यहाँसम्म त गाडीमा आउँछन्। तर(करीव १४ किमी टाढा रहेको) घरसम्मै पुग्न गाढामै जानुपर्छ।
“४ वर्षको हुँदा मेरो खुट्टा मड्केको थियो। तव त्यसमा वाँसको काम्रा लगाईयो। घाउ भित्रभित्रै पाक्न र सढ्नथाल्यो। त्यसरी खुट्टा गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो।
एकचोटी (सार्वजनिक) गाडी चढेको थिएँ। गाडी चढिकसेपछि पनि मलाई धकेलेर निकालियो। त्यसवेला लाग्यो कि म कमजोर रहेछु। आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिनुपर्यो भन्ने भावना मनमा आयो। साइकल् चढ्नुपर्यो भन्ने सोच आयो। त्यसैवेला टम् व्हिटेक्करले सगरमाथा चढेका थिए। पुष्कर शाहले विश्व साइकल् यात्रा शुरु गरेका थिए।
‘अपाङ्गको चाहना स्थायी शान्तिको कामना’ नारा राखेर मैले २०५९/६० सालमा महाकालीमेची साइकल् यात्रा गरेँ। ३१ जिल्ला पुगेँ। ३३०० किलोमीटर् साइकल् चलाएँ। अपाङ्ग पनि कोहिभन्दा कम हुँदैनन् भनेर। अरूले जे काम गर्छन् अपाङ्गले पनि गर्नसक्छन् भन्ने सन्देश मैले यात्रामार्फत् दिएँ। त्यसपछि पनि यस्ता थुप्रै साइकल् यात्राहरू गरेँ र विभिन्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिएँ।
अव अर्को भ्रमण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गर्नुछ। अहिले पनि त्यहाँ अपाङ्ग कामै छैनन्। वेकार छन् भन्ने सामाजिक मान्यता छ। त्यस्तो होइन भनेर देखाउनुछ। त्यसवाहेक ‘प्यारलिम्पिक्स्’मा पनि भाग लिने इच्छा छ।
यी इच्छा साकार गर्न अवरोध भनेकै एउटा नयाँ र हलुका साइकलको कमी हो। आजकल त्यसैका लागि ‘स्पन्सर्’ खोज्दैछु।
बिहान छोराछोरीलाई स्कुल पठाएर इ रिकशा चलाउन आउछु र साझमा छोरा छोरी लिन स्कुल पुग्नु पर्छ। नाका बन्दभएको त धेरौ कमाइ हुन्थ्यो माथी बसपार्क सम्म पनि जान पाउथ्यो अहिले पाउदैन गल्लीहरुमा मात्र चलाउन दिन्छ त्योशैले कमाइ अलि कम हुन्छ। मैले इ रिक्सा चलाउन लागेको १० महिनाजती भयोहोला त्योतिबेला महिलाले त्योती रिक्सा चलौदैनथे अहिले धेरैले चलाउनु हुन्छ।
५ (देबकला परियार
भुरिगाउ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
काठमाडौँ(टीकापुर साइकल् यात्रा
डोको बोक्दा डोको पनि भारिनै हुन्छ त्योसैले दुपट्टामा घाँस काटेको। एउटा गाईछ र ५,६ वटा बाख्रा छन । दिनमा ४ दुपट्टा घाँस काट्छु। पहिले निकुञ्जको पोस्टमा शोधेपछी घाँस र पात टिप्न दिन्थ्यो ।सङकट्काल लागेपछी त्यो पनि दिन छाड्यो अब त गाईबस्तु पाल्न पनि गाह्रो भएको छ। आफ्नो घरको काम सक्काएर अरुको खेतमा काम गर्न जान्छु। खेतमा बँदेल हरिनहरुले सबै बाली खाइदिन्छन । बरु सरकारले अन्तै सुरक्षित ठाउमा सारिदीए हुन्थ्यो ।
अछामबाट यहाँ अएको वहाँ धेरै दुख भएर यता भए सरकारी भएपनी स्कुलहरु हुन्छन भनेर।
सुरेन्द्र र इशानको फेसबुक पेज अनि सुरेन्द्रसँगको कुराकानीका आधारमा हाम्रो पात्रोका लागी सुयोग ढकाल
श्रोत: हाम्रो पात्रो (Aug 29 2016)
← काठमाडौंदेखि टिकापुर साइकल यात्रा भाग १
अस्ट्रेलिया पाठेघरको मुखको क्यान्सर निर्मुल गर्ने पहिलो देश बन्न सक्ने →
बलात्कारको विरुद्ध काठमाडौँमा भयो र्याली, रन्जु दर्शना बनिन् सहभागी (फोटो फिचर)
चैत्र ११ नयाँ प्रहर संवाददाता 0
काठमाडौंदेखि टिकापुर साइकल यात्रा भाग १
फाल्गुन २० Surendra Bajagain 0